Janaayo 11 | Centennial Schools
District Home » Parents » 2020-2021 COVID-19 Info » Communication to Families » Farriimaha loo diraayo Qoysaska » Janaayo 11
Dhacdooyinkii rabshadaha watay ee ka dhacay Capitol usbuucii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo dhib badan. Marka aan ka fikirno shucuurta aan la kulanno, oo ay weheliso xaddidaadda cudurka faafa, waxaan dooneynaa inaan hubinno inaan halkaan u joogno ardaydeena. Toddobaadkii hore, qaar ka mid ah shaqaalaheennu waxay waqti ku qaateen inay ardayda kala hadlaan mowduucyadan. Markaan isku dayeyno inaan fahanno dhammaan dhacdooyinka sanadkii la soo dhaafay, waxaan dooneynaa inaan hubinno shaqaalaheenna iyo ardayda, gaar ahaan kuwayaga madow, kuwa asaliga ah, dadka midabka leh, kooxaha kale ee aan loo baahnayn, iyo qoysasku inay ogaadaan in Centennial ay kula garab taagan tahay oo ay halkan u joogaan inay ku caawiyaan .
Ardaydu waxay qaadaan dareeno kale oo xoog leh dhinacyo dhawr ah. Hadday ku dhibtoonayso iskuulka, ma dareemayso inay ku xiran tahay asxaabta ama dadka, dareenka raagaya ee lumitaanka ka imanaya caadi ahaan sanad dugsiyeedka caadiga ah uu keeno (iyo kuwa waayeelka ah, sanadkoodii ugu dambeeyay ee iskuulka), ama murugo guud ahaan waxa ay yihiin aragtidooda iyo la-kulankooda hareerahooda. Waxay u baahan yihiin inay dareemaan taageeradeenna, inay ogaadaan in qof dhageysanayo, oo codadkooda la maqlayo, iyo inay sameeyaan waxa ugu wanaagsan ee aan qabanno - jeclahay oo aan u sii wadno iyaga halkaas iyaga oo ah tababare, la-taliye, macallin, lataliye, u-doode, iyo saaxiib . Anagoo og dabeecada shaqaalaheena, waan kajawaabi doonnaa wicitaanka oo waxaan u joognaa ardaydeena.
Sannadkan, Arbacada waxaa loo asteeyey inay noqdaan maalmo xiriir xiriir bulsheed ardaydayada. Maamulayaasha iskuuladeena 6-12 waxay ardayda u heli doonaan laga bilaabo Arbacada, Janaayo 13 si ay u dhageystaan fadhiyada halkaas oo aan ku dhagaysan doonno ardaydeena oo aan ku taageeri doono waqtiyadan adag. Iyada oo xaddiga halganka ay wajahayaan ardaydeena, fursadan ayaa loogu talagalay iyaga iyaga oo la wadaagaya dareenkooda iyo helitaanka taageeradayada. Ka raadi macluumaad dheeri ah berri, Talaado, Janaayo 12, maamulaha ardaygaaga (ardayda dhigata fasalada 6-12) sida looga qeyb qaato kulammada dhageysiga toddobaadkan.
Inkasta oo nashaadkani uu udub dhexaad u yahay ardayda dhigata fasalada 6-12, waxaan sidoo kale aqoonsan nahay qaar ka mid ah qoysaskeena Centennial-ka ee lahaa ama raba inay ku yeeshaan wadahadalkan gurigooda. Waxaan ururinay ilo, hoosta, oo ay u isticmaali karaan qoysaskeenna Centennial-ka oo leh ardayda fasalada oo dhan.
Sidii hore loo soo sheegay, wada hadaladu waxay hubin doonaan ardayda inay helaan meel aamin ah oo ay kula wadaagaan dareenkooda. Fahamka iyo ixtiraamka heerka raaxada ee ardaydeena iyo in qoysasku rabaan inay wax ku lahaadaan fursadahaan, fadhiyada dhageysiga waxay noqon doonaan xulashada ardayga / qoyska haddii ardayga shakhsiyeed uu doorto inuu kaqaybqaato.
Fadlan ha ka waaban inaad la xiriirto maamulaha ardaygaaga wixii taageero dheeraad ah. Bilihii la soo dhaafay waxay sii wadaan inay noqdaan kuwo dhib badan. Iyada oo ay taasi jirto, waxaan rabnaa inaad ogaato inaan ka soo gudubno maalmahan isla markaana aan si wada jir ah u sii xoogaysan doonno. Waxaa jira maalmo fiican oo soosocda waxaan sugeynaa waqtigaas oo aan markale wada noqon karno markale.
Kheyraadka khadka tooska ah waxaad kaheli kartaa caawinaad si aad wax ugala qabato arrimaha guriga ardaygaaga:
Xariga Kheyraadka Centennial's (Kheyraadka ardayda, qoysaska, iyo bulshada weyn)
Kalahadal Caruurta Ku Saabsan Rabshadaha (Ururka Qaranka ee Cilmi-nafsiga Iskuulka)
Khibradaha Naxdinta Leh (Sesame Street in Bulshooyinka) (loogu talagalay ardayda dhigata fasalka 5-aad)